के दियो रामायण र महाभारतले नेपाली समाजलाई ? | mulkhabar.com
के दियो रामायण र महाभारतले नेपाली समाजलाई ?
January 30, 2018 | 11:53 pm 383 Hits
हनुमान रामायणका अर्का आकर्षक पात्र हुन्। हनुमानको भूमिका थिए दारा सिंह। उनको खास नाम दिदार सिंह हो। भारतको अमृतसर जिल्लामा जन्मिएका उनी कुस्तीबाज र फिल्मस्टारसमेत थिए। एक सय ४० भन्दा धेरै फिल्म खेलेका उनलाई ‘देसी हिरो’ समेत भनिथ्यो। उनको मृत्यु २०१२ जुलाई १२ मा ८३ वर्षमा भयो। विभिषणको भूमिका थिए गुजरातका कलाकार मुकेश रावल। उनको ६६ वर्षको उमेरमा निधन भयो। नोभेम्बर २०१६ मा मुम्बईको एक रेलवेमा उनी मृत फेला परे। उनले आत्महत्या गरेको आशंका गरियो तर, पारिवारिक स्रोतले भने आत्महत्याको अस्वीकार गरे।
यी धारावाहिकले हिन्दी भाषाको विस्तार गर्‍यो। दलितमाथि हुने भेदभाव बढायो। पुरुष मर्यादापालक वीर कहलियो। महिला रुखको फेदमा बसी बिलौना गर्ने र सार्वजनिक रूपमा निर्वस्त्र हुनुपर्ने कमजोर प्राणीको रूपमा चित्रित भए। र, समाज महिला हिंसातर्फ थप आकर्षित भयो। (उदाहरण द्रौपदीको भूमिकामा अभिनय गरेकी रूपा गांगुलीको जीवन कहानी नै पर्याप्त छ।) त्यही बिन्दुबाट घरघरमा बलिउड घुस्यो। बलिउडसँगै उतैको सौन्दर्य र सुन्दरतासम्बन्धी अवधारणा पनि घुस्यो। सिरियलको लत घुस्यो। अनि सँगै घुस्यो बजार। र, टेलिभिजन कम्पनीले मालामाल व्यापार गरे। यसकारण दुई धारावाहिक फगत टेलिशृंखलामात्रै थिएनन्, सांस्कतिक हस्तक्षेप गर्ने ‘पोलिटिकल गेम’ थिए। -अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार